Cameron.....: အိပ်မက်ထဲတောင်ထည့် မမက်ချင်ဘူး....
Posted by coral nyo at 00:46
ဝတ္တုတိုလေးဖတ်ပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို စဉ်းစားမိနေတယ်...။
မရောက်တာကြာလို့ မေ့နေပြီလားမပြောတတ် မမိုးး)
ဒီဝတ္ထုတိုလေးဖတ်ရင်း စိတ်ဝင်စားလာတာနဲ့ ညွှန်းထားတဲ့ အရင် ၂ ပုဒ်လဲ တခါတည်းဖတ်သွားတယ် မမ။ တမျိုးတော့တမျိုးပဲနော်.. ယောက်ျားတချို့က မိန်းမတွေရဲ့ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိတတ်တာတွေ. တခြားမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သေးသေးမွှားမွှားလေးကအစ sensitive ဖြစ်တတ်တာတွေကို လျစ်လျူရှုတာပဲလား. တကယ်ပဲ မသိကြတာလား.. သူတို့အတွက်တော့ ဒါတွေဟာ အရေးမပါဘူးလို့ ထင်ထားကြတာများလားးးးးး
ဖတ်ပီးရင်ထဲ တမျိုးပဲ။ ယောက်ျားတွေအများစုက အဲလိုပဲလားသိဘူးနော်။ ဘလော့တွေလဲ မရောက်ဖြစ်တာနည်းနည်းကြာသွားတယ်မမ။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်မီးမလာလို့လေ။
ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတွေရဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူညီတဲ့အချက်တွေက အများသားဆိုတော့
အရင်ပို့စ်တွေကိုတော့ ဖတ်ပြီးသားပါ အမ
အခု အဆက်လေးကို ဆက်ဖတ်ရတော့
ပေးအုံးနော် မ ....ယောကျာ်းတွေက
လုံးဝမယုံရဘူး မ ရေ...အဲဒါအမှန်ပဲ :(
ဟိုက် အပေါ်က ကွန်မန့်ပေးထားတာတွေက မဒမ်တွေချည်းပါပဲလား...ဦးဟန်ကြည် အင်အားနည်းနေတော့ အားငယ်လှချေရဲ့း) အင်း ပြောရရင်တော့ လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှူပုံချင်း ကွဲကောင်းကွဲမယ်ထင်ပါရဲ့ ကိုယ့်လူရေ...